Sawirkani waa dawladda ay Isaaq rabaan | allsanaag
Sawirkani waa dawladda ay Isaaq rabaan
Beesha Isaaq, Soomaali inteeda kale waxay uga go’ayaan waa inay helaan dawlad iyaga u gaar ah, waxaase nasiib xumo ah in Madaxdii Soomaaliyeed ugu hambalyeeynayaan niman Qabiil iskuu raacay oo u heshiiyey inay Umad kale ee Soomaaliyeed ee la degta ku dhibaateeyaan. Sidoo kale Bulshadii Caalamka ayaaa maalgelinaysa koox lid ku ah Qaranimaddii SOOMAALIYEED.
Sawirka hoose ninka gacanta taagaya waa beesha Habar awal, Sacad Muuse ee Muuse Biixi ka soo jeedo , ninka bidix ka sii xiga waa Beesha Siilaanyo Habar jeclo, ninka ku sii xiga waa beesha Habar Awal Sacad Muuse ee Biixi, ninka ku sii xiga waa beesha Habar jeclo ee Siilaanyo, Ninka ku sii xigaa waa Beesha Muuse Biixi Habar Awal, Sacad Muuse. Labada nin ee ku sii xigaa waa hogaamiyiaashii jabhaddii xaaraanta ahayd ee SNM, waana Gaca ku dhiiglayaashii hogaaminayey Jabhaddas , waxayna ka soo kala jeedaan beelaha Habaar jeclo iyo Habar Awal Sacad Muuse. Ninka ugu danbeeya ee joornaalka afka SNM ku hadla ee jamhuuriya akhrinaya isaguna waa Habr jeclo. Guud ahaan waa sideed, waa Afar Habar jeclo iyo Afar Habar awal ah. Bal is waydii madaxweyne Farmaajo cidda uu u hambalyeeyey iyo waxku kalifay?
Sawirka hoose waa marabbidda ka soo jeeda beesha Warsangeli iyo AgoontII ay aabayaashood dileen BIIXI IYO Siilaanyo . iyagu shaqadoodu waa maalmaha sanaadiiqda inay soo fuulaan tiknikada SNM oo argagax ku ridaan beeshii ay ka soo jeedeen Caruurtooda iyo dumarkooda.
← Puntland oo saldhig Booliis ka dhisaysa Hadaftimo Xingalool oo la dhagax dhigay saldhiggii sadexaad ee gobolka Sanaag →